Ireo matihanina momba ny dia avy any Saint Gilles, any La Réunion dia nampiofanina ho manam-pahaizana Seychelles
Home » Travel Associations News » Ireo matihanina momba ny dia avy any Saint Gilles, any La Réunion dia nampiofanina ho manam-pahaizana Seychelles
Ny birao fizahan-tany Seychelles (STB) dia mitazona ny fahavononany hampianatra ireo mpiara-miasa ara-barotra momba ny toerana halehany rehefa nanao fiofanana ho roa andro ny ekipa ao an-tanànan'i Saint Gilles any Réunion hampiofana ireo matihanina momba ny Travel Trade ho lasa mpiasa mahay voamarina.
Ny programa Seychelles Smart Certification dia natao hanampiana ireo matihanina amin'ny varotra mba ho lasa manam-pahaizana manokana amin'ny toerana alehany- hahazoana antoka fa hahazo ny mpitsidika an'i Seychelles tanteraka hatramin'ny mpitsidika voalohany.
Ny programa dia mitaky ny mpandray anjara hamita fotoam-pampiofanana feno momba ny Nosy Seychelles, izay manana fe-potoana maharitra herintaona hivarotana fonosana fialantsasatra telo any Seychelles.
Ny fitsidihana fanabeazana any Seychelles no dingana farany ilaina mba hahazoan'izy ireo mari-pahaizana Seychelles voamarina.
Ny fandaharam-panofanana Seychelles Smart fanamarinana tamin'ity taona ity dia natao teo anilan'ny iraka ofisialin'i Ramatoa Bernadette Willemin, talen'ny Regional STB ho an'i Eropa any Réunion.
Ny talem-paritry ny STB ho an'i Eropa dia nanao ny Seychelles Smart Certification Training nahatafiditra mpiara-miasa 33. Nanampy azy ny Executive Executive Senior ao Reunion, Ramatoa Bernadette Honore.
Taorian'ny fahombiazan'ny fotoam-panofanana, Ramatoa Bernadette Willemin dia nanambara ny maha-zava-dehibe ny fampahalalana tsara ireo mpiara-miombon'antoka momba ny toerana haleha.
"Ilaina tokoa ny toerana itodiana toa antsika izay manana ny ankamaroan'ny orinasa amin'ny alàlan'ny fantsom-pizarana mba hanohizana ny fampiofanana ireo mpivarotra varotra fitsangatsanganana mba hahazoana antoka fa mahazo aina sy matoky izy ireo amin'ny fivarotana ny vokatray ary afaka mamadika ny fangatahana ho amidy ihany koa," hoy ny Talen'ny faritra STB ho an'i Eropa.
Izy mivady koa dia nitarika andian-dahatsoratra fiantsoana fivarotana niaraka tamin'i Reunion mpivarotra varotra fizahan-tany Seychelles ho toerana farany mahomby indrindra any amin'ny faritra.
Ramatoa Willemin sy Ramatoa Honore koa dia nanararaotra nanangona fahalinana bebe kokoa momba ny fampandrosoana ny tsena Reunion.
Ny seranam-piaramanidina mpiara-miasa STB ao La Réunion, Air Austral -niresaka fifandraisana mivantana amin'i Seychelles- dia niara-niasa tamin'ny programa ihany koa, tamin'ny fanamafisana ny fanohanany ity programa ity tamin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny STB hampiroborobo ny zotra Réunion-Seychelles.
Nampiroborobo i Nepal ho “Loharanon'ny bodisma” any Vietnam, Kambodza ary Thailand
Navoaka ny torolàlana voalohany momba ny dia any Karaiba